စက်ရုပ်ကိုဖြုတ်ပစ်နိုင်သောဖြေရှင်းချက်များ FANUC VISION
အမျိုးအစား "Unscrambling" မှမော်ကွန်းတိုက်
သောကြာနေ့, မေလ 08, 2020 by Cristina မာရီယာ Sunea
ဤပုလင်းချသည့်ဘင်သည်အော်ပရေတာများအား ၂ မီလီမီတာအိတ်အတွင်းပုလင်းများဖြင့်အိတ်များ၊ ထို့နောက်ပုလင်းပုလင်းပိတ်ခြင်းမှရှောင်ရှားပြီးတဖြည်းဖြည်း unscrambler ၏ infeed ကိုမှချနေကြသည်။
ပုလင်းအမျိုးမျိုးမှသင့်တော်သောပုလင်းငယ်များမှသည် 5L ဗုံအထိ!
Published in ပြည်တွင်းသတင်း မင်္ဂလာပါ
တစ်ဘူးတည်းသောပုလင်းရွေးစက် (flex picker)
၎င်းသည်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး (၅၀ မီလီမီတာမှ ၅ လီတာအထိ) နှင့်ပုလင်းအမျိုးမျိုး (ပတ် ၀ န်းကျင်၊ ဘဲဥပုံနှင့်စတုရန်း) အမျိုးမျိုးကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
Twin Head Flex Picker (ပုလင်းကောက်သူ)
ဤရွေ့ကား flex ကောက်ကောက်ပုလင်းအသိအမှတ်ပြုမှုများအတွက်ရူပါရုံကိုအသုံးပြုသည်သောပုလင်း unscrambler နှင့်ပုလင်းဖမ်းပြီးနှင့် positioning ကိုများအတွက်စက်ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုလင်းပေါ်တွင်ခြစ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ!
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇူလိုင်လ 13, 2016 by Cristina မာရီယာ Sunea
ဤ pallet unloading system သည် box ၏အောက်ခြေ (pallet) ကိုသိမ်းယူပြီး box သို့မဟုတ် silo များကို unscrambler ၏ bin ထဲသို့တဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်သွင်းပေးသည်။
တစ်ခုတည်း pallet အလွှာ (ဗန်း) ချစားပွဲ - ပုလင်း unscrambler
ဒီ tray ချစားပွဲပတ်ပတ်လည် / စတုရန်းပုလင်း၏ဗန်း depalletizes ။ ပုလင်းများကိုစက်ခါးပတ်ထဲသို့ဗန်းများထဲသို့ထည့်သည်။ ထို့နောက်၎င်းတို့သည်ထွက်ပေါက်ခါးပတ်များပေါ်သို့ကျွေးပြီးပုလင်းတစ်ချောင်းစီဖန်တီးသည်။
Double pallet အလွှာ (tray) မှတင်သောစားပွဲ - ပုလင်းကိုဖယ်ရှားသည်
ဒီပုလင်း unscrambler ပတ်ပတ်လည် / စတုရန်းပုလင်း၏ဗန်း depalletizes ။ ပုလင်းများကိုစက်ခါးပတ်ထဲသို့ဗန်းများထဲသို့ထည့်သည်။ ထို့နောက်၎င်းတို့သည်ထွက်ပေါက်ခါးပတ်များပေါ်သို့ကျွေးပြီးပုလင်းတစ်ချောင်းစီဖန်တီးသည်။ အများဆုံးအမြန်နှုန်း: 3000 - 6000 BPH ။